China Aluminium LATTICE PANEL ifektri kanye nabaphakeli | I-Alucosun
Iphaneli ye-ALUMINUM LATTICE (A2）
I-ALUMINUM PANEL LATTICE
Alucosun Okwakamuva ® wethula amaphaneli ahlanganayo esizukulwane esisha kumgogodla we-aluminium omusha esikhundleni se-polyethylene ejwayelekile noma umgogodla ogcwele amaminerali. Lo mkhiqizo omusha obizwa ngephaneli ye-aluminium lattice wenziwa yi-Alucosun yezidingo eziqinile zemithethonqubo yokubamba umlilo emikhiqizweni yokwakha.
Yakhiwe ngo-100% wesakhiwo se-aluminium, iphaneli ye-Alucosun aluminium lattice ihlanganiswe nokusebenza okungavamile komlilo, okulula nokulula kokuqanjwa kwezinhlanganisela kwenza iphaneli le-Alucosun aluminium lattice ephusheni labakhi.
Iphaneli ye-Aluminium lattice yakhiwe ngomgogodla we-aluminium ongashisi futhi isongwe phakathi kuka-0.7mm no-0.5mm aluminium aminyene (ibanga langaphandle le-AA3003 noma i-AA5005) langemuva.
EU BS EN 13501-1 Ukuziphatha komlilo- A2
Ukukhiqizwa kwentuthu- s1
Amaconsi Avuthayo- d0
Ubukhulu BONKE 3MM, 4MM
UBUKHULU besikhumba sangaphambili 0.50MM, 0.60MM, 0.70MM
UBubanzi 1220MM, 1250MM, 1500MM, SIZE ETHOLAKALISIWE
UBUDE IBANGA 1000MM-5000MM
Isisindo 3.8KG / M (0.5,0.4 / 4MM); I-4.3KG / M (0.7,0.5 / 4MM)
● Isisindo esincane:
Ngokuqanjwa kobuchwepheshe obuyisisekelo, iphaneli ye-Alucosun lattice inesisindo esilula kakhulu ngokuqhathaniswa nezinto ezijwayelekile ezingacimi umlilo ezilula kakhulu kunezinye izinto ezinobulukhuni obufanayo. Igcina izindleko zakho zokuhamba nezindleko zabasebenzi futhi.
● Ukusebenza okungenamlilo:
Lesi sakhiwo siqinisekisa iphaneli lokungashisi futhi sikwenze kuthembeke futhi kudume kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ze-façade, ikakhulukazi e-USA (NFPA285), UK (BS 476-4 standard) nase-Australia (AS1530.1 standard) lapho kunesidingo esiphakeme kanye nokufuna ukubambezeleka okunamandla.
Ukuba yilungu lomhlaba wethu, sinomthwalo wokuvikela izwe lethu. Umthamo wethu we-aluminium okhiqiziwe wephaneli le-Alucosun A2 ungaphinda usebenze kabusha ngo-100%. Futhi akukho ukungcola ngesikhathi sokukhiqizwa nokusetshenziswa.
● Amandla Peel
Umgogodla wepaneli ye-Aluminium lattice ayiyona into engafakwanga njengamashidi amabili ekhava. Okuhlangenwe nakho okufanayo nakho kunwetshwa okushisayo okuncane nokucindezela kokuncipha. Khonamanjalo sinokuhlolisiswa kwamandla wekhasi masonto onke ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kokukhiqizwa. Amapaneli ethu awanamakhasi.
● Intuthu Ubuthi
Ukufa kwabantu abaningi ngomlilo akubangelwa ukusha, kepha kubangelwa ukuhogela intuthu, i-Alucosun A2 core iyi-aluminium emsulwa futhi ayikwazi ukutsha. Ngenkathi ama-cores welinye iphaneli lendabuko elingenamlilo liyizinto zamakhemikhali, ngakho-ke amaphaneli ethu amasha aphephe kakhulu futhi athembekile ngoba awanakho okukhiphayo lapho kufudunyezwa.
I-Aluminium lattice panel aluminium core ilungele ukusikwa futhi igxishwe futhi ingagqokiwe kangako kuma-routers. Ngakho-ke, konga isabelomali sakho nesikhathi. Kuthatha ukwakheka okuningi okuhlukile futhi ukwakheka kwayo okuhle akuphazamisi ukuzinza noma amandla ayo.
IZIMPAHLA IZINGA LOKUHLOLA ISIMO noma UNIT IMIPHUMELA
Unit Isisindo I-ASTM D 792 Kg / m² 4.3
I-Aluminium Front Thick - mm 0.7
Ukumboza Ubukhulu EN ISO 2360-2003 μm 32
Ipensela Ukuqina I-ASTM D3363 HB iminithi 2H
Impact Resistance I-ASTM D2794 kg.cm ＞ 110
Esinemthombo Ukuvumelana nezimo I-ASTM D 4145 I-T-bend (0-3T) 2T
Yesigcilikisha Ukunamathela I-ASTM D 3359 Akukho ukulahleka kokunamathela Kuphumelele
Ukugcinwa Kwemibala I-ASTM D 224 Ama-Max Rating 5 Units ngemuva kwamahora angama-4000 Kuphumelele
Ukugcina isicwebezelisi I-ASTM D 523 80% ngemuva kwamahora angu-4000 Kuphumelele
Ukumelana Neshoki I-ASTM D 4214 Izilinganiso ze-Max Rating 8 ngemuva kwamahora angu-4000 Kuphumelele
Ukumelana Namanzi Abilayo I-AAMA 2605 100 wemizuzu engama-20 Ngaphansi kuka-5% 4B
Ukumelana Ne-Muriatic Acid I-AAMA 2605 Amaconsi we-10 we-10% HLC, ama-15mins Akukho ukushisa
Alkali Ukumelana I-ASTM 1308 10%, 25% NaOH, 1 Ihora Alukho ushintsho
Usawoti Spray Ukumelana I-ASTM B117 Amahora we-Upto 4000 Alukho ushintsho
Izinga Lokushisa Eliphansi - -40 - 80 Alukho ushintsho
Amandla Peel I-ASTM D 1781 mm · N / mm 140mm · N / mm (Isikhumba sangaphambili) 125mm · N / mm (Isikhumba sangemuva)
Amandla eqine I-ASTM E8 UMpa 5mm / iminithi, 69MPa
Inkomba yokunciphisa umsindo enesisindo I-ISO 717-1: 2013 db I-22 (-1, -2)
Iwaranti ejwayelekile yiminyaka eyi-15 - 20 incike lapho kutholakala khona amaphrojekthi ngqo. Iwaranti yeminyaka engama-30 iyatholakala ngemikhiqizo ephakeme eqeqeshwe kahle.
Izinketho ezahlukahlukene zombala nokuqeda zenza i-Alucosun yakamuva®inketho oyithandayo yokwakha imvilophu. Okunhlobonhlobo kwe-spectra, ukuqina kwekhwalithi yezinhlelo zokupenda yokuqeda njll. Kwenza ukufanela kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza lokwembathiswa noma ngabe kuyisakhiwo sezohwebo, isakhiwo sokwakheka kwezimpawu esinobunikazi obuyingqayizivele noma uphawu olumisiwe. Alucosun Okwakamuva®inikeza ukuhlukahluka okujwayelekile nokwesiko ngaphandle kwendawo yokumboza ikhoyili. Alucosun Okwakamuva® indawo iqediwe nge-PVDF ne-NANO uhlelo lokupenda ku inqubo eqhubekayo yokumboza ikhoyili eqinisekisa ikhwalithi nokuvumelana ngokuhambisana nemininingwane ye-AAMA 2605.
NANA-PVDFuhlelo lokupenda lokuzihlanza. Uhlelo olunjalo lwePaint lunikeza ijazi eliphezulu elingeziwe elicwebezelayo elinezinhlayiya ze-NANO ezixhumene kakhulu ku-PVDF Finish; okuqinisekisa indawo ebushelelezi. Ubuso obushelelayo nobucacile benza ukungcola nothuli kunganamatheli okunikeza isakhiwo ukubukeka okuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Amasistimu kapende we-PVDF ne-NANO ahlala isikhathi eside aqinisekisa iminyaka eyi-15-20 yokuqeda iwaranti.
KUSHUNYISIWE amapaneli anezinketho ezahlukahlukene ze-FInish ayatholakala ku-Alucosun®kepha kuncike ekukhawulweni kwesikhathi esithile nosayizi. Imvelo evikelwe ngamapaneli wesendlalelo se-anodized anokuqina okuqinile kokuklwebheka kunika iwaranti cishe iminyaka engama-30.
I-PE ne-HDPEupende usetshenziswa kabanzi ezinhlelweni eziningi ngenxa yobubanzi bemibala nokucutshungulwa komnotho, manje iminyaka yesiqinisekiso inganwetshwa isuke eminyakeni emi-5 iye eminyakeni engu-8 ngezinhlobo ezahlukahlukene zokumboza. Ukuqedwa kwe-HDPE kuyatholakala njengohlelo lokupenda langokwezifiso.
Lapho iphaneli ye-aluminium lattice ingaphansi komkhawulo wokwakhiwa kwesibaya, izobe igxila esigabeni esigoqiwe futhi ingavula i-V-groove ne-U-groove, njll ngokusho kwesidingo somphetho, izindlela eziningana ezijwayelekile zokugaya. Izosebenzisa imishini ekhethekile ye-grooving yephaneli ye-aluminium ukuqinisekisa ukuthi ukujula kokulimaza akulimazi into ehlukile ye-aluminium futhi izosala no-0.8 mm ubukhulu. Ingamukela izindlela zokuqinisa njengezimbambo ezisemngceleni, njll. Njengoba kudingeka esigabeni sokugaya.
Langaphambilini I-ALUMINUM COMPOSITE PANEL (YOPHAWU)
Olandelayo: I-ALUMINUM HONEYCOMB PANEL
Iphaneli ye-Aluminium Lattice